Dawladda: Maamulha dugsiga ayaa go’aanka iska lahaan doona - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda maamulka dugsiyada sare iyo aqoon kororsiga Anna Ekström. sawir: Claudio Bresciani/TT
Dawladda: Maamulha dugsiga ayaa go’aanka iska lahaan doona
Xeerar howlahooda u caddeeyneya maamuleyaasha
La cusbooneeyay fredag 1 september 2017 kl 11.19
La daabacay fredag 1 september 2017 kl 10.04
Dawladda Sweden ayaa ku talo jirtan in wax laga bedelo sharciga iskuullada si loogu suurtageliyo in maamuleyaasha dugsiyadu go’aan iney ka gaari karaan xisbiyada siyaasadda ee lagu casumeyo iskuullada, sida ay dawladdu shir jaraa’id ku soo ban-dhigtay maanta.
Qorshaha soo jeedinta xeerka ee dawladdu ku talo jirto wuxuu salka ku hayaa sidii iskuullada loogu suurtagelin lahaa iney diidmo kala hor iman karaan xisbiyada dooneya iney iskuulladooda booqasho ku tagaan.
Dawladda ayaa u soo ban-dhigtay guddiga talada shuruucda iney iskuulladu ku xaddidi karaan booqasho ey ku yimaadaan iskuullada keliya xisbiyada xubanaha ku leh baarlamanka, goleyaasha gobollada iyo degmooyinka, baarlamanka Yurub ee habka dimoqoraadiyadda lagu soo doortey. Iskuullada ayaa sidoo kale laga mamnuucey in aaney xisbi ku diidi karin oo keliya inuu leeyahay fikirro loo fahmi karo in aaney dimoqoraadiyad aheyn.
Anna Ekström (S), wasiiradda maamulka dugsiyada sare, ayaa sheegtay in qorshahan loo soo ban-dhigeyo iyada oo loo daneeyneyo ardeyda in iskuulladu aaney aheyn goob bulsho iyo in la dhowr bayadda howleed ee ardeyda iyo macallimmiinta.
–Cidda ugu habboon oo ay tahay inay go’aamiso fikirrada siyaasadeed ee iskuullada lala imanayo, in xisbiyada lagu casumo waxey yihiin maamuleyaasha, sida ay sheegtay.
Maanta ayaanay caddeeyn cidda hageeysa xeerka, middaasina oo sabatay iney iskuulladu ka gaabsadaan dhammaan casumaadda xisbiyada siyaasadeed.
–Qorshaha soo jeedinta xeerkan waxaa maamuleyaashu u caddaaneeysa howshooda kaga aaddan arrinkaa, sida ay sheegtay Anna Ekström, ahna wasiiradda hoggaanka dugsiyada sare.
Ma taageersan tahay in xisbiyada laga xanibo booqashada iskuullada ey ku tagaan?